PressReader - Isolezwe: 2018-06-15 - I-VW Polo GTI entsha ishibhile kunendala
I-VW Polo GTI entsha ishibhile kunendala
Isuka ekhasini 5 I-VW Polo GTI entsha iyiPolo elisha elijwayelekile kodwa elitoniwe. Ngaphambili ishaya ngolayini obomvu ogijima kwi -radiotor grille bese iqoshwa uGTI ngaphezulu. Uma uthanda ukwazi ukuyifaka amaLED headlihgts.
Ngezansi inama air curtains amnyama amise okuka-C kubhampa. Eceleni kugqame amarimu angu-17 inch kodwa uma uthanda uyakwazi ukuthola awu-18 inch, nokuyiwo engiwathandayo futhi kulunguza ama-brake callipers abomvu kuywo.
Ngemuva ishaya ngezinqawe ezimbili ezigqize nge-chrome ngakwesokunxele, diffuser emnyama kanjalo ne-roof spoiler. InamaLED lights.
Okhakhayini uma uthanda uyakwazi ukuyifaka i-panoramic sunroof.
Imibala amakhasimende angakhetha kuyo ihlanganisa omhlophe, obomvu, omnyama kanjalo noluhlaza okwesibhakabhaka.
Uma ungena ngaphakathi ishaya ngezitishi ezibomvu esiteringini nangasegiyeni.
Uma uthanda uyakwazi ukuthi i dashboad ibe nomunye umbala njengokuthi ibe bomvu.
Uma uthanda uyakwazi ukufakaa i-Active Info Display entsha futhi enhle engu-10.25 inch.
Uciphaza u-view esiteringini bese ikuvezela imininingwane yemoto.
I-infotainment system yayo efika nayo yiComposition Media engu-8.0 inch edlala neCD.
Uma uthanda nokho uyakwaz ukuyigaxa iDiscover Media nayo engu-8.0 inch kodwa eveza nenkombandlela.
Umshayeli engakwazi ukuyigaxa i-Advanced Safety Package ehlangisa iParallel Park Assist, Park Distance Control, Rear View Camera, Blind Spot Detection namawindi agoqwa ngogesi.
IneDriver Alert System etshela umshayeli ukuthi akaphumule uma isola ukuthi akasanakile. Kukhona ne-Automatic PostCollision Braking System eyenza ukuthi ime uma kade ibe sengozini.
IPolo GTI yimoto ekahle ikakhulu ngoba ivulekile futhi iyonga nakuphethroli okuyenza imoto yansuku zonke.
Uma uphuthuma ijubane layo yilapho lisebenza khona futhi kumnandi ukuyishayela.
Nokho uma uyithenga kumele ungahehwa yinani ngoba kuzomele unezezele izinto ezimbalwa ukuze ibe ngcono kakhulu. Inani Ifika ne warranty yeminyaka emithathu noma u-120 000km, iservice plan yeminyaka emtihathu noma u-45 000km ne anti-corrosion warranty yeminyaka engu-12. Kumele iye kwisevisi ngemuva kokuhamba u-15 000km. 2.0 TSI 147 kW DSG R375 900 Izinto ongazifaka: Brecscia 18 Alloy Wheels - R5 550 Discover Media Navigation - R12 150 Active Info Dispaly - R8 650 Park Distance Control (PDC) front&rear - R3 150 Advanced Safety Package: Parallel Park Assist + PDC, Rear View Camera, Blind Spot Detection _ Electronic Folding Mirrors - R11 850 Lights and Vision Package: Auto Dim Mirror + Auto Headlights + Rain Sensor - R3 850 LED Headlights - R12 450 Sport Select - R5 050 Luxury Package: Climatronic Air Conditioner + Keyless Acess (“entry”and “go”) - R8 650 Panoramic Sunroof - R10 550 Leather Sport Seats with seat heating - R9 850